‘अब हाम्रो मुलुकको रक्षा सेनाले मात्रै गर्न सक्छ’ - Dainik Nepal
‘अब हाम्रो मुलुकको रक्षा सेनाले मात्रै गर्न सक्छ’
राकेश कुमार शर्मा २०७३ पुष १९ गते २०:०९
प्रधानमन्त्री समेत मन्त्रीमण्डल, सांसद र राजनीतिक दलहरुका नेताहरुका कारण मुलुकको स्वाधिनता धरापमा परेको छ । नेपालमा संविधान निर्माण गर्ने सभासदहरु,सांसदहरु र नेताहरुले नै संविधान–२०७२ लाई नमानि रहेको र पालना नगरेको अवस्था छ । यसकारण नेपालमा संविधान सभाबाट वि.सं. २०७२ साल असोज ०३ गते जारी संविधान मरिसकेको छ । जस्तैः २५ जनाभन्दा बढी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न पाइदैन । तर बढी मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् ।
‘राष्ट्रघाति र गद्दार’ नेताहरुको संविधान संशोधनले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतालाई धरापमा पार्ने काम गरेको छ । अब हाम्रो मुलुकको रक्षा सेनाले नै गर्न सक्छ ।
विक्रम सम्वत् २०७२ सालअसोज ३ गते जारी भएको संविधान हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै हो । यो संविधान दिर्घकालिन सम्म टिकाउ संविधान होइन । यो संविधान फेल भएर जानेछ ।
विश्वकको एक मात्र हिन्दु राष्ट्र रहेको नेपाल हाम्रो मुलुक थियो । धर्मनिरपेक्षता लादियो । यसरी वि.सं. २०६२/२०६३ सालमा नेपालीहरुको धर्म माथि त प्रहार भयो नै अब संस्कार, संस्कृति र भाषा माथि पनि प्रहार हुँदैछ । विद्यार्थीलाई विध्यार्थी, विदयुतलाई विधुत नेपालीहरुलाई शुद्ध भाषा बोल्न र लेख्न नदिने, लिपी नै परिवर्तन गराई दिने, व्याकरण लेस गराइ दिने जस्ता चलखेल र षडयन्त्र हाम्रो मुलुकमा भइरहेको छ ।
मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतालाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांँसद र नेताहरुबाट धरापमा पार्ने काम भएको छ । यसका लागि दोषी र जिम्मेवार हामी नागरिकहरु छौ । स्तै अवस्था मुलुकको रहि रहने हो भने रुवान्डा, सिरिया, अफगानिस्तान, हाइटी, टर्की, लेवनान, सुडान र इथोपिया आदि आदि जस्ता राष्ट्र हुन के बेर । कति समय लाग्छ र ? सपार्नलाई समय लाग्छ । तर बिग्रनलाई पल भर समय पनि लाग्दैन यस कारण बेलामा आमनागरिकहरु सचेत र जागरुक हुन जरुरी छ ।
वि.सं. २०५२ साल देखिको द्वन्द्वमा माओवादीका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आदि आदि जस्ता ‘राष्ट्रघाती र गद्दार’ नेताहरुको कारण मुलुकको विकास २०-३० वर्ष पछाडि धकेलिएको छ । नेपालको सबै राजनीतिक पार्टी भित्र राष्ट्रघाती र गद्दार नेताहरु छन् ।
संविधान संशोधनमा पुष्पकमलदाहाल, कृष्णबहादुर महरा, शेरबहादुर देउवा, कृष्णप्रसाद सिटौला र सुभाष चन्द्र नेम्वाङ आदि आदि जस्ता ‘राष्ट्रघाति र गद्दार’ नेताहरुको स्वार्थ रहेको देखिन्छ ।
‘राष्ट्रघाति र गद्दार’ नेताहरुको संविधान संशोधनले मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतालाई धरापमा पार्ने काम गर्दछ । अब हाम्रो मुलुकको रक्षा सेनाले नै गर्न सक्छ ।
हाम्रो मुलुकको सेनाले मुलुकको हित चाहान्छ कि अहित ? सेना माथि नै निर्भर छ । सेना आउ देश बचाउ, सेना आउ देश बचाउ । कसैको प्रतिक्षा र आश नगर । विश्वमा कतै नभएका नेपालका नागरिकहरु अवसरवादी, स्वार्थी र सत्ताको पूजारी छन् ।
सेनाहरुले राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई सोध्नैपर्छ । वि.सं. २०६२–०६३ को जनआन्दोलनमा मुलुकलाई धर्म निरपेक्षतागर्न र हाम्रो मुलुक विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको पहिचान हटाउनलाई कति डलर र पाउण्ड लिए । अब मुलुकलाई विखण्डन गर्न कति डलर र पाउण्ड लिएका हुन् ।
नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, प्रजातन्त्रको रक्षा, पाँच प्रदेश, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न, राज्यकोष ढुकुटी दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गर्न, मनपरीतन्त्र र छाडातन्त्र आदि आदि जस्ता विकृतिहरु हटाउन मुलुकको हित र रक्षाका लागि श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र र जंगबहादुर राणा आदि आदि जस्ता राष्ट्रवादी नयाँ शक्तिको आवश्यकता रहेको छ ।
पुर्वाञ्चल विकाश क्षेत्र, मध्यमाञ्चल विकाश क्षेत्र, पश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र, मध्य पश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र र सुदुर पश्चिमाञ्चल विकाश क्षेत्र यी ५ वटा विकाश क्षेत्रलाई (१)पुर्वाञ्चल प्रदेश (२)मध्यमाञ्चल प्रदेश (३)पश्चिमाञ्चल प्रदेश (४)मध्यपश्चिमाञ्चल प्रदेश (५) सुदुरपश्चिमाञ्चल प्रदेश नाम राखेर विकेन्द्रिकरण गरिनु पर्छ । राजनीतिक दलहरुका नेताहरु र सांसद (सभासद) हरुको अनिर्णय र अराजकताका कारण मुलुकको हित र रक्षाका लागि श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह, श्री ५ महेन्द्र र जंगबहादुर राणा आदिआदि जस्ता राष्ट्रवादी नयाँ शक्तिको आवश्यकता (Requirement of Rise Nationalist New Power) रहेको छ ।
मकवानपुर, हेटौँडा ।